(၂)ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ရွေးပါဆိုရင် ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ – Askstyle
(၂)ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ရွေးပါဆိုရင် ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ
မိန်းကလေးတွေဘဝမှာ ရွေးချယ်စရာက အမြဲတမ်းတစ်ခုမက ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူမဖြစ်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ကမ်းလှမ်းတဲ့သူ၊ ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့သူတွေ အများကြီးတွေ့ရမှာပါ။ ဒီအထဲကမှ နောက်ဆုံးရွေးစရာလူ (၂)ယောက်ထဲမှာ ဘယ်သူကိုရွေးရမယ်ဆိုတာမသိဘဲ တွေဝေဒွိဟဖြစ်နေခဲ့ရင်၊ အကူညီလိုနေခဲ့ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီး ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
(၁) လွတ်လပ်ခွင့်ကို သိတတ်သူ
တစ်ချို့ယောက်ျားတွေက လွတ်လပ်ခွင့်ကို မသိတတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုမသိတတ်တဲ့ယောက်ျားကို ရွေးချယ်မိရင် တစ်သက်လုံးအကျဉ်းကျနေသလို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်အောက်၊ သူ့ရဲ့ အာဏာတွေနဲ့ နိုင်ထက်စီးနင်း အလုပ်ခံရမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့စကားအသွားအလာ၊ အပြုအမူ၊ သင့်ကိုဆက်ဆံပုံ၊ သူ့ညီမတွေ အစ်မတွေကိုဆက်ဆံပုံကို သေချာလေ့လာပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ကို သိတတ်တဲ့သူကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။
အဆင့်အတန်းခွဲခြားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ လုံးဝမယူသင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်နေ့မှာ သူဟာ ကြီးပွားသွားတဲ့အခါ၊ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာ အောက်ခြေလွတ်သွားတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေ ဖြစ်လို့ပါ။ ဘယ်လို အကဲခတ်လို့ရလဲဆိုတော့ သူ့ထက် ပညာအရည်အချင်းနိမ့်တဲ့သူတွေ၊ သူ့ထက်အဆင့်နိမ့်တဲ့သူတွေ၊ စားပွဲထိုးတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ သူဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
(၃) ယောက်ျားမိန်းမ မခွဲခြားသူ
တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းမထက် ယောက်ျားကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲအတွေးအခေါ်ရှိကြပါတယ်။ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေအားလုံးကို မိန်းမအလုပ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ လုံးဝမယူသင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကဲခတ်လို့ရလဲဆိုရင် သူဟာ အိမ်မှာဘယ်လိုနေလဲ၊ ထမင်းဟင်းချက်ဖူးလား၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖူးလား၊ သူ့အဝတ်သူလျှော်လား ဒါမှမဟုတ် အိမ်သားတွေအတွက် သူ တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖူးလားဆိုတာကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
နောက်ထပ်ရွေးချယ်သင့်တဲ့သူက တာဝန်ယူတတ်သူပါ။ အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကိုယ်သူတာဝန်ယူတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။ သနားကြင်နာစိတ်ရှိပြီး အားနည်းတဲ့သူတွေဖက်က ရပ်တည်တတ်တဲ့သူ၊ အချောင်လိုစိတ် မရှိသူ၊ ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါးထိခိုက်နစ်နာစေမယ့်အရာမျိုး မလုပ်သူကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ တာဝန်ယူစိတ်ရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေဆီမှာပဲ တွေ့မြင်ရမယ့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ရဲရင့်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူ
သင်တစ်သက်လုံးပေါင်းသင်းရမယ့် သူဟာ အူတူတူ၊ အတတဆိုရင် လုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ တစ်သက်လုံး သင်က ဦးဆောင်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်ရင်တော့ရပေမယ့် အဲလိုမဟုတ်ရင်တော့ လုံးဝ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရဲရင့်ထက်မြက်ပြီး ဉာဏ်ပညာရှိသူ၊ ဇွဲလုံ့လဝီရိယကြီးမားသူ၊ ဘဝကိုလေးလေးနက်နက်ကြိုးစားရုန်းကန်သူ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးသူ၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ရှိပြီး ဦးဆောင်တတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာ ဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သုညကနေ ပြန်စနိုင်ကြတာကြောင့် သူတို့နဲ့နေရင် သင့်ဘဝအတွက် စိတ်ချရပါတယ်။
မိနျးကလေးတှဘေဝမှာ ရှေးခယျြစရာက အမွဲတမျးတဈခုမက ရှိနတေတျပါတယျ။ အိမျထောငျမပွုခငျမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ခဈြသူမဖွဈခငျမှာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကို ကမျးလှမျးတဲ့သူ၊ ခဈြခှငျ့ပနျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးတှရေ့မှာပါ။ ဒီအထဲကမှ နောကျဆုံးရှေးစရာလူ (၂)ယောကျထဲမှာ ဘယျသူကိုရှေးရမယျဆိုတာမသိဘဲ တှဝေဒှေိဟဖွဈနခေဲ့ရငျ၊ အကူညီလိုနခေဲ့ရငျ ဒီစာလေးကိုဖတျပွီး ဒီအခကျြတှနေဲ့ကိုကျညီတဲ့ ယောကျြားမြိုးကိုရှေးခယျြပါ။
(၁) လှတျလပျခှငျ့ကို သိတတျသူ
တဈခြို့ယောကျြားတှကေ လှတျလပျခှငျ့ကို မသိတတျကွပါဘူး။ ဒီလိုမသိတတျတဲ့ယောကျြားကို ရှေးခယျြမိရငျ တဈသကျလုံးအကဉျြးကနြသေလို ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့လကျအောကျ၊ သူ့ရဲ့ အာဏာတှနေဲ့ နိုငျထကျစီးနငျး အလုပျခံရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့စကားအသှားအလာ၊ အပွုအမူ၊ သငျ့ကိုဆကျဆံပုံ၊ သူ့ညီမတှေ အဈမတှကေိုဆကျဆံပုံကို သခြောလလေ့ာပွီး လှတျလပျခှငျ့ကို သိတတျတဲ့သူကို ရှေးခယျြရမှာပါ။
အဆငျ့အတနျးခှဲခွားတတျတဲ့ ယောကျြားတှဟော လုံးဝမယူသငျ့တဲ့ ယောကျြားတှဖွေဈပါတယျ။ တကယျလို့ တဈနမှေ့ာ သူဟာ ကွီးပှားသှားတဲ့အခါ၊ အောငျမွငျသှားတဲ့အခါမှာ အောကျခွလှေတျသှားတတျတဲ့ သူမြိုးတှေ ဖွဈလို့ပါ။ ဘယျလို အကဲခတျလို့ရလဲဆိုတော့ သူ့ထကျ ပညာအရညျအခငျြးနိမျ့တဲ့သူတှေ၊ သူ့ထကျအဆငျ့နိမျ့တဲ့သူတှေ၊ စားပှဲထိုးတှကေို ဘယျလိုဆကျဆံလဲဆိုတာကို ကွညျ့ပွီးသိနိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ သူဟာ ယဉျကြေးတဲ့သူဖွဈဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။
(၃) ယောကျြားမိနျးမ မခှဲခွားသူ
တဈခြို့ယောကျြားလေးတှဟော မိနျးမထကျ ယောကျြားကမွတျတယျဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစှဲအတှေးအချေါရှိကွပါတယျ။ အောကျခွသေိမျးအလုပျတှေ၊ အိမျမှုကိစ်စတှအေားလုံးကို မိနျးမအလုပျလို့ပဲ သတျမှတျထားတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုလူမြိုးတှဟော လုံးဝမယူသငျ့တဲ့ ယောကျြားတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုအကဲခတျလို့ရလဲဆိုရငျ သူဟာ အိမျမှာဘယျလိုနလေဲ၊ ထမငျးဟငျးခကျြဖူးလား၊ သနျ့ရှငျးရေးလုပျဖူးလား၊ သူ့အဝတျသူလြှျောလား ဒါမှမဟုတျ အိမျသားတှအေတှကျ သူ တဈခုခုလုပျပေးဖူးလားဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့လိုကျပါ။
နောကျထပျရှေးခယျြသငျ့တဲ့သူက တာဝနျယူတတျသူပါ။ အလုပျမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ အိမျမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျနရောမှာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာပဲဖွဈဖွဈ သူ့ကိုယျသူတာဝနျယူတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးကို ရှေးခယျြရမှာပါ။ သနားကွငျနာစိတျရှိပွီး အားနညျးတဲ့သူတှဖေကျက ရပျတညျတတျတဲ့သူ၊ အခြောငျလိုစိတျ မရှိသူ၊ ကိုယျ့ကွောငျ့ သူတဈပါးထိခိုကျနဈနာစမေယျ့အရာမြိုး မလုပျသူကို ရှေးခယျြရမှာပါ။ ဒါတှအေားလုံးဟာ တာဝနျယူစိတျရှိတဲ့ ယောကျြားတှဆေီမှာပဲ တှမွေ့ငျရမယျ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။
(၅) ရဲရငျ့ပွီး ဉာဏျရညျထကျမွကျသူ
သငျတဈသကျလုံးပေါငျးသငျးရမယျ့ သူဟာ အူတူတူ၊ အတတဆိုရငျ လုံးဝအဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ တဈသကျလုံး သငျက ဦးဆောငျပွီး တာဝနျယူနိုငျရငျတော့ရပမေယျ့ အဲလိုမဟုတျရငျတော့ လုံးဝ အဆငျမပွပေါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ရဲရငျ့ထကျမွကျပွီး ဉာဏျပညာရှိသူ၊ ဇှဲလုံ့လဝီရိယကွီးမားသူ၊ ဘဝကိုလေးလေးနကျနကျကွိုးစားရုနျးကနျသူ၊ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးသူ၊ ဖွတျထိုးဉာဏျရှိပွီး ဦးဆောငျတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးကို ရှေးခယျြပါ။ ဒီလိုယောကျြားမြိုးဟာ ဘယျအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ သုညကနေ ပွနျစနိုငျကွတာကွောငျ့ သူတို့နဲ့နရေငျ သငျ့ဘဝအတှကျ စိတျခရြပါတယျ။
26 နှစ်နဲ့ 32 နှစ်ကြားမှာ ဘာကြောင့် လက်ထပ်သင့်တာလဲ💖 💘 …
26 နှစ်နဲ့ 32 နှစ်ကြားမှာ ဘာကြောင့် လက်ထပ်သင့်တာလဲ💖 💘 ... အသက် 26 နှစ် မှ 32 နှစ် ကြား…
မချစ်​​တော့လို့ဖြစ်ဖြစ်​ ချစ်​လျှက်​နဲ့ခွဲရခွဲရ ​ဝေးများသွားခဲ့ရင်​ ပြန်​ဆုံစည်းခွင့်​ရှိနိုင်​ပါမှလား?
မချစ်​​တော့လို့ဖြစ်ဖြစ်​ ချစ်​လျှက်​နဲ့ခွဲရခွဲရ ​ဝေးများသွားခဲ့ရင်​ ပြန်​ဆုံစည်းခွင့်​ရှိနိုင်​ပါမှလား? ​ဝေးများသွားခဲ့ရင်​ ပြန်​ဆုံနိုင်​ပါ့မလား,,,? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ မချစ်​​တော့လို့ဖြစ်ဖြစ်​ ချစ်​လျှက်​နဲ့ခွဲရခွဲရ ​ဝေးများသွားခဲ့ရင်​ ပြန်​ဆုံစည်းခွင့်​ရှိနိုင်​ပါမှလား,,,? ဘယ်​​လောက်​ဘဲ့ ချစ်​ချစ်​ ဖူးစာမပါရင်​​ဝေးရတာပါ ဘယ်​​လောက်​…
💕 ဒီအချက်တွေတော်တော်များများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးကို ရထားရင် သင်ဟာ ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ 💕…
💕 ဒီအချက်တွေတော်တော်များများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးကို ရထားရင် သင်ဟာ ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ 💕… သင့်ဆီကို Good Morning / Good Night…
ကျိုက်ဒေးဝိ ဆံတော်ရှင် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့နတ်ကျားအစောင့် နဲ့ ဘုရားလေးဆူမီခဲ့သောပတ္တမြား